SAUS T00J 4.4.2 Root ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Thursday, September 29, 2016 AsusMMFont, AsusRoot No comments
ASUS T00j Android Version 4.4.2 ကို Root လုတ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Asus IntelDriver [8-MB]
အထက်မှာပေးထားဆော့ဝဲလ်လေး၂ခုကို ဒေါင်းပီးသွားရင် Asus IntelDriver လေးကို မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Run လိုက်ပါ Run လို့ပီးသွားပီးဆိုရင်
RootZenFone5KitKat Wirrar ကို Extract files.. အဖြစ် ဖြည်လိုက်ပါ
အောက်ပါပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ပါ Root လုတ်ပုံအထိ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ
Keyboard မှ 1 ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ မိမိရဲ့ဖုန်းဟာ Auto Reboot ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
CWM recovery တွေ Auto Install လုတ်မှာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Install လုတ်ပီးသွားတာနဲ့ဖုန်းဟာ ပါဝါပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ် USB မဖြုတ်သေးနဲ့အုံး
နောက်တစ်ခါ Reboot ကျအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်
Reboot ၂ခါကြသွားပီးပြန်တက်လာပီးဆိုရင်တော့ SuperSU လေးမြင်ရပီဖြစ်ပါတယ်
lainnya dari Computer Software, ROOT, လက်တွေ့လေ့လာ နည်းပညာ
Credit >>> ဘလော့ခရီးသည် ကြီးငယ်မဟူ လူဟူသမျှ
မြန်မာစာ အတွက်ကတော့ ကိုကျော်စွာသွင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့
Smart Zawgyi Pro .bat ကို ဒေါင်းလုတ်ယူပြီး ထည့်လိုက်ပါ မြန်မာစာလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။
Smart Zawgyi Pro (Android version) အား ကိုသက်နိုင်စိုး မှပြန်လည်ရေးသားပါသည်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးအဆင်ပြေထားပါတယ် တခြား ASUS Series တွေတော့မစမ်းရသေးပါဘူး။
Ref-Aung Khaing (Myanmar mobile app)
Test for authorize connection between PC and phone, by Open FolderFilerootzenfone5kitkatv2 > Hold Shift + Right Click + Open Command Window
Congratulation! Now your Asus Zenfone5was rooted. You can verify that your Asus Zenfone5is successfully rooted or not by downloading Root Checker App on Play Store. Hopefully the article ofHow to Root Asus Zenfone5on Android 4.4.2 kitkat useful for you. Good Luck!
ASUS ZENFONE5T00J KITKAT V4.4.2 ကို ROOT ကြမယ်ဗျာ...
ASUS ZENFONE5ကတော့ ဈေးနှုန်း မလေးရှားရင်းဂစ် ၅၅၀ ပါတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်... ဒီပို့စ်တင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်... ယခင်တုန်းက ROOT လုပ်ရတာ နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိပေမယ့် အခုတော့ လွယ်ကူလာသလို သုံးစွဲတဲ့သူတွေလည်းအနည်းငယ်ရှိလာပါပြီ... သူနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ (FULL SPECIFICATIONS)ကိုတော့ ဒီလင့်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်... အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိရင် comment ပေးခဲ့ပါ...
IntelAndroidDrverSetup ကို ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ပါ...
Driver install လုပ်ပြီးသွားရင် မိမိဖုန်းရဲ့ settings>about>software information ကိုသွားပြီး build number (၇ ကြိမ်လောက် ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ)... ပြီးလျှင် back key တစ်ချက်နှိပ်ပြီး developer options ထဲ က usb debugging ကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း check box ကို on ပေးပါ...
ထို့နောက် ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာအား USB Cable ဖြင့်ချိတ်ဆက်လျှင် အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာမယ်...
RootZenFone5v442 ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်မှာ zip ဖြည်လိုက်ပါ... Folder တစ်ခုရလာပါမယ်... အဲဒီ Folder ထဲမှာမှ Files ဆိုတဲ့ Folder ပေါ်မှာ shift ကိုနှိပ်ထားပြီး right click နှိပ် open command window here ကိုရွေးပါ... အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပါ....
cmd window ပေါ်လာရင် adb devices ဆိုတာကိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ... အောက်ပါ ပုံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်... မြင်ရပြီဆိုရင် root လုပ်လို့ရပါပြီ...
အဲဂလိုမျိုးပေါ်မလာခဲ့ရင် computer နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ usb cable ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်ပါ... ဖုန်းရဲ့ screen မှာ
အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာခဲ့လျှင် Always allow from this computer ဆိုတာကို on ပြီး OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ...
ကောင်းပြီ ဒီအဆင့်ရပြီဆိုရင် Desktop ပေါ်က RootZenFone5v442 ထဲမှာ
Root-ZenFone5-en.bat ဆိုတာလေးကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ... အောက်က ပုံအတိုင်းပေါ်လာလျှင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ...
မိမိဖုန်းဟာ Rebooting (၅)ကြိမ်... (၆)ကြိမ်လောက် ပိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်... အောက်က ပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာရင်တော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ...
ဖုန်းပြန်တက်လာရင် Application Drawer ထဲက SupperSU ပုံလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ...
SupperSU ရဲ့ Setting ထဲက Enable Superuser နဲ့ Re-authentication မှာရှိတဲ့ Check box ကလေးတွေကို အမှန်ချစ်ခြစ်ပေးပါ... အောက်ကပုံအတိုင်းပါ ... သင့်ဖုန်းက root ဖြစ်သွားပါပြီ...
အားလုံးပြီးသွားလျှင် မြန်မာစာဖွန့်ထည့်ရတာလွယ်သွားပါပြီ... အဆင်ပြေပါစေ...